Izindlu zodaka zikaMohan - I-Airbnb
Izindlu zodaka zikaMohan
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguMohan
"Iindlu zodaka zikaMohan" ulwandiso lweMohan's Binsar Retreat yindawo yokuhlala enefenitshala epheleleyo kwaye ibekwe kakuhle apho sibeka phambili ukukhululeka kweendwendwe zethu. Umntu unokungqina umbono omangalisayo wokuphuma kwelanga, isibhakabhaka esimnyama esi-orenji kunye neentaba ezigqunywe likhephu kunye nokuntyiloza kweentaka inokuba yi-alam yakho yasekuseni yendalo obusoloko uyinqwenela. Abasebenzi bethu abanehlombe bamkela iindwendwe kwindawo yokuhlala kwaye banomdla wokuzinika inkonzo ngeyona ndlela ibalaseleyo.
1. Igumbi ngalinye linekhitshi elincinane elinezinto eziluncedo ezisisiseko ezifana ne-induction, izitya njl.njl.
2. I-backup yombane, kuphela kwiibhalbhu kunye nezibane zetyhubhu (usebenzisa i-invertor ye-induction, i-heater yombane ayivumelekanga). Kukho imitha yombane kwigumbi ngalinye kwaye intlawulo yombane iya kuhlawulwa lundwendwe ngokofundo.
3. Ekubeni sihlala ekhaya, asiboneleli ngenkonzo yamagumbi. Iindwendwe zamkelekile kwikhefi yethu, "Mohan's Café" okukuhambo oluyimizuzu emi-2 ukuya phezulu (izinyuko). Sibonelela ngeendidi zezitya / zokupheka kunye nezimuncumuncu (zonyaka).
“Okukhona usiba kokukhona uye uve- Yonwabele! Yayibulela kakhulu! - Njengoko i-Mohan's Mud Houses iyindawo yokuhlala, siyakuxabisa ukuba iindwendwe zithe cwaka.
UDIKIWE?? Ungakhathazeki sinemisebenzi emininzi ye-adventures - Ukuhamba kwehlathi (i-4km-15km), ukutyelela emini njlnjl. Kufuneka usazise kwaye yonke into iya kulungiselelwa.
I-Mohan's Cafe, itempile yaseKasardevi, iJungle ihamba
Iindwendwe ziya kunikwa iinkcukacha zoqhagamshelwano ngelixa zingena.